Septambra 10, 2012 amin'ny 6:51 am
Vao tsy ela akory aho upgraded ny 0.8.4 ary dia niatrika olana tamin'ny Photoshelter pejy. Flag kisary ny tsy mampiseho tsara. Indro misy ohatra iray ny amin'ny olana pejy (eo amin'ny farany ambany amin'ny pejy); http://digiart.photoshelter.com/gallery-list
ary eto dia izay izany pejy maneho ny tsara; http://digiart.no/
fomba fijery tsara indrindra Kay-Age
Sal! Niezaka ny mandefa hafatra fanohanana mampiasa ny endriky, nefa tsy handefa.
Septambra 10, 2012 amin'ny 9:14 am
Mitovy aminao izany nanakana ny fidirana amin'ny ny WP-content / Plugins Directory, toy izany koa ny sary dia tsy mora, Izaho dia manoro hevitra ianao jereo ny .htaccess rakitra
Septambra 11, 2012 amin'ny 2:13 aho
Miarahaba indray. Efa tafiditra ao amin'ny ftp aho, ary voafehy ny fidirana ho any amin'ny Plugins Directory, ary afaka mahazo ireo tsara; http://digiart.no/wp-content/plugins/transposh-translation-filter-for-wordpress/img/flags/ad.png
Mieritreritra aho fa tsy maintsy misy zavatra hafa. Izany no afa-tsy ho an'ny pejy ity Photoshelter tsy miasa anynymore. Koa, raha miova ny fisehon'ny mba std, dia miasa ho an'ny pejy photoshelter koa. brgds Kay
Septambra 11, 2012 amin'ny 12:28 am
Ny sary tsy idirana amin'ny toerana photoshelter, Hitako ianareo fa nanova ny fomba anaty filatron-dahatsoratra, Manantena aho fa ianao no afa-po amin'ny vahaolana ity. 😉
Septambra 11, 2012 amin'ny 7:44 am
Eny afa-po aho. Transposh dia vokatra lehibe 🙂 izaho kosa dia hanandrandra any an-photoshelter accessright olana taty aoriana. Misaotra anao nandray fanohanana.
Septambra 28, 2012 amin'ny 6:33 aho